आफ्नै बिहेको निम्तो बाँडेर फर्किदा रमिताको मृत्यु ! - Sabal Post
आफ्नै बिहेको निम्तो बाँडेर फर्किदा रमिताको मृत्यु !
धनगढी – माघ १३ मा रमिताको विवाह हुँदै थियो । जीवनमा एक पटक हुने विवाहका लागि उनमा कम्ति उमङ्ग थिएन । त्यसैले उनी आफ्नाे विवाहको निम्ता साथिहरुलाई बाँडन हिड्दै थिईन । बिहीबार अपरान्ह कञ्चनपुरको पुर्वपश्चिम महेन्द्रराज मार्ग अन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिका ४ महेन्द्रनगर चौमन्न चोकमा टिपरको ठक्करबाट उनको ज्यान गयो ।
मृतक हुन रमिता भट्ट(रोशनी) । ग्राभेल बोकेको से १ क ८८७ नम्बरको टिपरले ठक्कर दिएर दशरतचन्द नगरपालिका १ गुरुखोलाकी २० वर्षीया युवती भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । साईकल चढेकी रमितालाई टिपरले ठक्कर दिएको थियो । टिपरको पछाडीको चक्काले उनको टाउको किचेपछि उनको घटनास्थलमा नै ज्यान गयाे । घटना जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कञ्चनपुरको कार्यालयदेखि झण्डै ५ सय मिटर दुरी पश्चिममा भएको हो । स्थानीयले टिपर आतङ्क बढेको भन्दै टिप्परमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेका थिए ।
भीमदत्त नगरपालिका १५ गोबरैयामा डेरागरी बस्ने रमिता जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस स्नातक तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत थिइन् । डेढ बर्ष अघि उनले प्रकाश टेरसंग भागि विवाह गरेकी थिइन् । प्रकास टेरका भाई महेश टेरले भागेर विवाह भएको बताए । ‘डेढ बर्ष अघि दाजु प्रकाशसंग रमिताको भागेर विवाह भएको थियो’ ‘उनले भने ‘साँस्कृतिक परम्परा अनुसार विवाह भएको थिएन, यही १३ माघमा विवाह हुन लागेको थियो ।’
रमिताको विवाहका लागि केटा र केटीपक्षबीच तयारी भइरहेको थियो । नजिकका आफन्त र साथीभाईलाई निमन्त्रणा दिन उनी गोबरैया डेराबाट साईकल चढेर बजार निस्किएकी थिइन् । उनको शव महाकाली अस्पतालमा राखिएको छ । ठक्कर दिने टिपरलाई घटनास्थलबाट साँझ अवेरसम्म पनि प्रहरीले कार्यालय ल्याउन सकेको थिएन् । भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले केही राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । स्थानीयले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषी उपर कार्बाहीको माग अघि सारेका छन् । कञ्चनपुर प्रहरीले घटना बारे अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ । घटना लगत्तै भागेका चालक जयराज पनेरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
थाइल्याण्डमा हुने फेसन फेष्टिबलको लागी छानिए साढे…
अहिलेको सरकार अनैतिक क्रियाकलापमा अग्रसर छ :…
कन्डम आयातमा ४ वर्षमै बाहिरियो ६६ करोड…
गाउँपालिका अध्यक्षले नै प्रहरी कुटे
पाँच हजार शिक्षकको सरुवा गरिँदै
फेसबुकको अध्यक्षबाट मार्क जुकर्बर्गलाई हटाउने प्रयास विफल